Wararka - Qalabka khadka wax soo saarka cusub ee kooxda Daqo
Hawlaha kala-baxa badan
Laabista Ulaha Copper
Qaybo & Qalabka Spear
Shirkadaha Xalka Shirkadaha
Katelogs Xalka Shirkadda
Diiwaanada Codsiga Shirkadda
Diiwaangelinta Codsiga Shirkadda2
Diiwaangelinta Codsiga Shirkadda 3
Qalabka khadka wax soo saarka cusub ee kooxda Daqo
Sannadkii 2020, shirkadeennu waxay xiriir qoto dheer la yeelatay shirkado fara badan oo heer caalami ah oo heer caalami ah iyo kuwo ajnabi ah, waxayna dhammaystireen horumarintii la habeeyay, rakibidda iyo hawlgelinta tiro badan oo ka mid ah qalabka UHV.
Daqo Group Co., LTD., Waxaa la aasaasay 1965, waa koox ganacsi oo heer-sare ah oo ku hawlan danab sare iyo hooseeya oo dhammaystiran oo koronto, qaybo ah, qalabka tareenka xawaaraha sare leh iyo warshadaha kale, kuna lug leh dhinacyada korantada, maalgashiga , sayniska iyo farsamada. Waxay ka aas aastay dalka Shiinaha afar xarumood oo warshadeed, ku dhowaad 10,000 oo shaqaale ah iyo hanti guud oo dhan 6 bilyan yuan. Waxay leedahay 28 shirkadood oo ka hooseeya, kuwaas oo 7 ka mid ahi ay iskaashi la leeyihiin Siemens oo Jarmalka ah, Moeller oo Jarmalka ah, Eaton oo Maraykanka ah, Cerberus oo Switzerland ah iyo Ankater oo Danmark ah.
Ka dib markii aan si dhow ula shaqeynay injineerrada farsamada ee Daqo group muddo ku dhow seddex bilood, waxaan u soo bandhignay shirkadda Daqo Group qalabkii looga baahnaa khadka cusub ee wax soo saarka. Oo lagu dhammeeyey rakibidda aagga iyo ku-dallinta qalabka 5 maalmood gudahood, khadka cusub ee wax-soo-saarka ayaa si habsami leh loogu soo saaray wax-soo-saar.
Waqtiga boostada: May-10-2021
Xalka, Codsiyada, Shabakadaha Iibka IyoAqoonta